भाग्यमानी अनिलसँग १२-२७ कुरा | Hamro Khelkud
भाग्यमानी अनिलसँग १२-२७ कुरा
काठमाडौं– रहरै रहरमा भलिबल खेल्न सुरु गरेको एउटा बालक पछि फुटबलको स्टार हुँदै राष्ट्रिय टोलीको कप्तान बन्न सक्छ भनेर कसले अनुमान गर्ला ? व्यवसायिक रुपमा अहिले पनि उनी फुटबल खेलाडी हुन् । तैपनि उनलाई भलिबल अहिले पनि उत्तिकै मन पर्ने खेल हो । उनी अरु कोही नभएर लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका कप्तान अनिल गुरुङ । दक्षिण एसियाली भन्दा बाहिर गत वर्ष नेपालले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को आधिकारिक प्रतियोगिता सोलिडारिटी कप जित्दा अनिल कप्तान थिए । त्यो नेपालले जितेको एएफसीको पहिलो उपाधि हो ।
उनी खुलेर कमै बोल्छन् । तर, उनमा आवेग, करुणा, भावना वा अनुभव नभएर कम बोल्ने भएका होइन् । त्यो त उनको स्वभाव मात्रै हो । उनलाई पनि साथीभाई सँग घुम्न रमाइलो गर्न मन नलाग्ने होइन । यद्दपी, सोचे जस्तो परिस्थिति सधै हुन्छ भन्ने छैन । राष्ट्रिय टोलीले लामो समय सम्म गोल गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी आलोचना स्ट्राइकरको हुने गर्दछ । त्यो आलोचना अनिलले पनि कम खेपेका छैनन् ।
कारण उनी पनि राष्ट्रिय टोलीमा त्यहि अपजसे भूमिकामा रहने गर्दछन् । त्यहि अपजसे भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि उनी एउटा फुटबल खेलाडीका लागि अर्थपूर्ण मानिने ५० अन्तर्राष्ट्रिय खेलको नजिक पुगेका छन् । ताजकिस्तानविरुद्ध यहि भदौं २० गते खेल्ने अवसर पाए भने त्यो उनको ५० औं खेल हुनेछ । त्यो खेललाई लिएर पनि उनी उत्साहित छन् ।
‘म करियरमा कति खुसी छु शब्दमा बयान गर्न सक्दिन । यहाँ सम्म पुग्छु भन्ने पनि थिएन । एक दिन छोड्नु पर्छ भन्ने पनि सोचेको थिइन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्न्यासको निकट रहेका अनिलले भने, ‘तर खेल्न सकुन्जेल फुटबल खेल्छु । फुटबल खेल्दा सधै खुसी रहे । कहिल्यै कोही प्रति मेरो गुनासो रहने ।’ सानोमा झुम्राको बल बनाएर खेलको स्मरणमा ताजै राखेका उनी जहिले सम्म खेल्न सक्छन् त्यो बेला सम्म मनाङबाटै खेल्ने चाहाना बताउँछन् । आफुलाई अविवाहित बताउने ३० वर्षे उनी भन्छन्,‘मनाङले मलाई बुझ्छ । त्यो क्लबसँग मेरो आत्मियता पनि त्यत्तिकै छ ।’
फिफा विश्वकप २०१० को छनोटका लागि सन् २००७ मा नेपालले ओमानसँग खेल्दा राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यू’ गरेका पोखराका उनी दशकपछि ५० औं क्यापको नजिक उभिएका छन् । यो सबै मेहनत र भाग्यले सम्भव भएको उनको मान्यता छ । ‘स्कुलबाट रहरै रहरमा खेल्न थालेको म साहारा एकेडेमीबाट थप निखारिए । त्यहाँ २ वर्ष खेले र त्यसपछि ‘ए’ डिभिजन काठमाडौं आए । ब्रिगेड ब्वाइजबाट खेलेपछि लगत्तै अर्को सिजन रुस्लान थ्री स्टार गए । अर्को वर्ष मनाङ मस्र्याङ्दी पुगे । त्यसपछि एनआरटीबाट खेलें । तर दुर्भाग्य नेपालमा घरेलु फुटबल निरन्तर भएन । ’
त्यसबीचमा सहारा युकेको सहयोगमा उनी दुईपटक फुटबल प्रशिक्षणका लागि बेलायत पनि गए । बेलायतमै खेल्ने प्रक्रिया नमिलेपनि त्यहाँको अनुभवले उनको यात्रा भारतीय लिग (आइ लिग) तिर मोडियो । उनी सम्झन्छन् ‘बेलायतमा निखारिएको मेरो स्कीलले आइ लिगमा काम लाग्यो । ’ यी सब अनुभव उनका लागि मिठो सम्झनाका लागि काम लाग्नेछन् । अब त उनी बाँकी खेल जीवन स्वदेशमै बिताउन र क्लबलाई जति सक्दो सफलता दिलाउन प्रयासरत रहने बताउँछन् ।
उनै आफुलाई निकै भाग्यमानी मान्ने अनिलसँग हाम्रो खेलकुदका लागि दिपेश तिमलसिनाले गरेको १२–२७ कुरा ।
– ७ बर्षको उमेर बाट खेल्न सुरु गरे ।
२. पहिलोपटक पदक जित्दा कस्तो महसुस भयो ?
– स्कुलमा हुँदा जिल्ला स्तरिय प्रतियोगितामा उपाधि जितेका थियौं । निकै खुसी भएको थिए । बिस्तारै यहि खेलमा लागे । यो लेभल सम्म खेल्छु भन्ने लागेको थिएन । राष्ट्रिय टोलीको कप्तान र विदेश गएर पनि खेल्छु भन्ने लाग्ने त कुरै आएन ।
– सानो हुँदा गाउँमै भलिबल खेल्थे, हाम्रो तिर भलिबल र फुटबल निकै खेलिन्छ । प्रतियोगिता पनि धेरै हुन्छ । त्यसले पनि आकर्षित गर्यो । पछि पोखरा झरेपछि मालेपाटनको मैदानमा खेल्थे । विस्तारै फुटबल आदत जस्तो भयो । खेल्दै जाँदा सफलता पनि मिल्दै गयो, अनि त झन् छोड्न सकिएन ।
तस्बीर: बिबेक सुबेदी/ हाम्रोखेलकुद
४. कुन फोन चलाउनु हुन्छ र फोन किन्दाको मुल्य ?
–आइफोन सेभेन । यसको मुल्य १ लाख २० हजार रुपैयाँ ।
५. कुन गाडी चढ्नु हुन्छ र मुल्य ?
–हुन्डाईको क्रेटा गाडी । यसको ४२ लाख रुपैयाँ पर्छ ।
६. बार्षिक कति कमाउनु हुन्छ ?
– १५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा कमाउँछु ।
– लाहुरे बन्थे होला, बाबाको सपना थियो छोरा लाहुरे भएको हेर्ने ।
– स्कुलसम्मको अध्ययन गरेको छु।
– मलाई कमेडी र लभ स्टोरी मन पर्छ । पछिलो पटक हेरेको स्पाईडर म्यान ।
१०. सबै भन्दा मन पर्ने नायक र नायिका ?
– सलमान खान । नायिकामा चाहिँ धेरै जना मनपर्छ एउटा भन्दा कट्रिना कैफ ।
– गायक सुगम पोखरेल र गायिका आस्था तामाङ मास्के ।
१२.सबैभन्दा धेरै पटक सुनेको गीत ?
– सुगम पोखरेलको अवस्था
– सिंगल छु ।
१४.किताब कतिको पढ्नु हुन्छ? पछिल्लो पटक पढेको किताब ?
– खासै किताब पढ्ने बानी छैन, न्युजमा चाहिँ अपडेटेड नै हुन्छु।
१५. अहिलेसम्म कति देश पुग्नु भयो ? सबैभन्दा मन परेको देश ?
– कति देश पुगे गनेको छैन । पासपोर्ट चाहिँ तेस्रो पटक लिइसके ।सबै भन्दा मनपरेको हङकङ र कीर्गिस्तान ।
– आफ्नै ठाँउ पोखरा
– नेपाली खाना र सुकुटी ।
१८.खाना बनाउनु हुन्छ ? आफैले पकाएको सबैभन्दा मिठो के लाग्छ ?
– एक्लै बस्ने भएकोले खाना बनाउछु । सबैभन्दा मिठो पकाउने कोरियन चाउचाउ ।
– सोसल मिडियामा एक्टिभ छु । प्रस्ताव नियमित जस्तै आइरहेको हुन्छ । मलाई कसैको चित्त दुखाउन मन लाग्दैन मजाले बोल्छु सबै सँग । तर प्रेमिका भनेर नै छैन । अरु जस्तो फ्लर्ट पनि गर्दिन कोहि कोहि केटिसँग त डरनै पो लाग्छ त ।
– मलाई पोखरामा छंदानै ब्रिगेड ब्वाइज क्लबबाट लिगको १२ खेलका लागि काठमाडौं बोलाइएको थियो । हरेक खेलमा ५ सय रुपैयाँ दिने सहमति थियो । मेरो खेल हेरेर बोनस सहित रु ९ हजार दिनु भएको थियो । त्यो पैसाले विशाल बजार गएर ३÷४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर शर्ट प्यान्ट र जुत्ता किनेको थिए । बाँकी पैसा आमालाई पठाए कस्तो खुसी हुनु भएको थियो ।
– आइलिगको सिलोङ लाजोङ जाँदा एकदमै राम्रो रकममा अनुबन्धित भएको थिए । विदेशी लिग खेल्दा खुसीको सिमा थिएन । दबाब पनि त्यत्तिकै थियो । मलाई भसोरा गरे अनुसार न्याय पनि गरे । पछि राष्ट्रिय टोलीको कप्तान घोषित हुँदा पनि खुसी लाग्यो । म निकै लक्की रहे करियर भर । जसरी कप्तानको जिम्मेवारी आयो त्यो असामान्य अवस्था थिएन । तर राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्न पाउदा गौरव महसुस त हुन्छ नै ।
– घरमै बसेर टिभी हेर्छु, साथीहरु सँग फिल्म हेर्न जान्छु । मुड चलेको बेला साँझ साथीहरुसँग समय बिताउन पनि मज्जा लाग्छ ।
– नपढेकोमा निकै पछुतो लाग्छ । सुरुमा म काठमाडौँ आएको घरमा मन पराउनु हुन्न थियो । आमालाई म काठमाडौँ आए भने पढ्दैन जस्तो लाग्थ्यो । म पढ्छु भनेर आाए तर, मैले साच्चै पढ्न चाहिँ पढिन।
२४.राष्ट्रिय टोलीमा सबैभन्दा मिल्ने साथि र आशालाग्दो खेलाडी ?
– विजय गुरुङ, हामी क्यापमा हुँदा प्रायजसो रुम मेट पनि थियौ । रोहित चन्द माथि आउने खेलाडी हो भन्ने लाग्छ । उ निकै राम्रो खेल्छ, भर्साटाइल छ, परिपक्क र फ्रेन्ड्ली छ, बाहिर खेल्ने भएर होला उसको प्रदर्शन उच्चस्तरको छ ।
– म्यानचेस्टर युनाइटेड र वायन रुनी ।
२६. तपाईको नजरमा फूटबल खेलको विकास कसरी होला ?
– केही दिन अघि मात्र हामी ५ वटा मैत्रीपूर्ण खेलेर जापानबाट फर्कियौं । अलग अलग टोलीसँग खेले पनि सबैको खेल्ने शैली उस्तै थियो । त्यहाँ जस्तै ग्रासरुट देखिनै फुटबल विकासमा जोड दिनु पर्दछ । नियमित रुपमा खेल हुनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु पर्दछ । हाम्रा कति राष्ट्रिय खेलाडीले राजधानीमा घासे मैदानमा खेल्न पनि पाएका छैनन् । धेरै भन्दा धेरै मैदान तयार गर्नुपर्दछ । मैदान नभएसम्म स्तर बढ्न सक्दैन ।
२७. आफ्ना शुभेच्छुकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– सधै माया गरिदिनु भएको छ त्यसले सधै हौसला मिल्छ । म निकै भाग्यमानी छु कहिले पनि कसैले नराम्रो भन्दिनु भएको छैन, सहयात्रामा सहयोग गर्ने सबैलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु ।